ဒူဒူကြီး: Flowmetering - Fluid and Flow
Fluid ရဲ့ characteristics ကို၊ density, dynamic viscosity နဲ့ kinematic viscosity ဆိုပြီး၊ ခွဲခြား ပါတယ်။
density (ρ) ဟာ၊ mass (m) per unit volume (V) ဖြစ်ပါတယ်။ Boilers တွေမှာတော့၊ steam ရဲ့ specific volume (vg) ကို၊ volume per mass အဖြစ် pressures နဲ့ temperatures အမျိုးမျိုးပေါါမူတည် ပြီး၊ 'Steam Table' မှတဆင့်ရယူပါတယ်။
အထက်ပါ specific volume (νg) ပုံသေနည်းအရ steam ရဲ့ density (ρ) ကိုတွက်ယူတဲ့အခါ၊
ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းကို၊ အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. density (ρ) of saturated water (ρf) and saturated steam (ρg) at various temperatures
saturated water နဲ့ saturated steam တို့ရဲ့ density ဟာ၊ temperature ပေါါမူတည်ပြီး၊ ပြောင်းလဲမှုရှိ ပါတယ်။ temperature မြင့်လာတဲ့အခါ၊ saturated water ရဲ့ density ဟာ၊ ကျဆင်းသွားပြီး၊ saturated steam ကတော့ temperature မြင့်လာတဲ့အခါ၊ compressible gas တွေလို၊ density ပါမြင့်တက်လာပါ တယ်။
dynamic viscosity (μ) ဆိုတာကတော့၊ fluid possesses အတွင်း စီးဆင်းနေမယ့် flow ကို၊ resists တားဆီးတဲ့ internal property ပဲဖြစ်ပါတယ်။ heavy fuel oil လို viscosity မြင့်တဲ့ fluid တွေဟာ၊ strongly resists flow ကိုဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။
fluid ရဲ့ dynamic viscosity ကိုတွက်ယူတဲ့အခါ၊ μ = Absolute (or dynamic) viscosity (Pa s), viscosity (Pa s), Δρ = Difference in density between the sphere and the liquid (kg/m), g = Acceleration due to gravity (9.81 m/s) နဲ့ r = Radius of sphere (m) ဆိုပြီး၊ သတ်မှတ်တွက်ယူ ပါတယ်။
fluid ရဲ့ absolute viscosity သို့မဟုတ် dynamic viscosity ကို၊ unit အနေနဲ့ pascal seconds နဲ့ တိုင်းတာပြီး၊ 'viscous force' လို့လည်းခေါါပါတယ်။ dynamic viscosity တွက်ယူတဲ့ပုံသေနည်းမှ၊ ကိန်းသေ တန်ဘိုးဖြစ်တဲ့ constants (2) နဲ့ (9) တို့ကတော့၊ experimental data တွေဖြစ်ပြီး၊ pascal seconds (Pa s) သို့ပြောင်းလဲတွက်ချက်တဲ့၊ conversion unit တွေဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံ absolute viscosity သို့မဟုတ် dynamic viscosity ရဲ့တန်ဘိုးကို၊ centipoise (cP) နဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိ ပြီး၊ 1cP ဟာ 10³ Pa s နဲ့၊ ညီမျှ ပါတယ်။
Fig. dynamic viscosity of saturated water (μf) and saturated steam (μg) at various temperatures
saturated water နဲ့ saturated steam တို့ရဲ့ dynamic viscosity ဟာ၊ temperature ပေါါမူတည် ပြီး၊ ပြောင်းလဲပါတယ်။ saturated water ဟာ temperature မြင့်လာတဲ့အခါ၊ dynamic viscosity ကျသွား ပြီး၊ saturated stream ကတော့၊ temperature မြင့်လာတဲ့အခါ၊ dynamic viscosity မြင့်တက်လာ ပါတယ်။
kinematic viscosity ဆိုတာကတော့၊ absolute သို့မဟုတ် dynamic viscosity နဲ့ fluid ရဲ့ density တို့ရဲ့၊ ဆက်သွယ်ချက်ဖြစ်ပြီး centistokes (cSt) နဲ့တိုင်းတာဖော်ပြပါတယ်။
pipe အတွင်းမှာစီးသွားမယ့် fluid flow ကို၊ one dimensionless quantity တခုဖြစ်တဲ့၊ Reynolds number (Re) နဲ့တိုင်းတာဖော်ပြကြပြီး၊ Reynolds number မှာ flow ရဲ့ characteristics တွေအားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။
ρ< > = Density (kg/m), u = Mean velocity in the pipe (m/s), D = Internal pipe diameter (m) နဲ့ μ = Dynamic viscosity (Pa s) တို့မှတဆင့်၊ Reynolds number (Re) ကိုတွက်ယူနိုင်ပါတယ်။
fluid ရဲ့ dynamic velocity နိမ့်တဲ့အခါ၊ resultant Reynolds number ဟာလည်း နိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. velocity profile ignoring viscosity and friction
pipe friction နဲ့ viscosity ကိုထည့်မတွက်ရင်၊ fluid ဟာ pipe အတွင်းမှာ၊ uniform velocity နဲ့စီးဆင်း သွားမယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။
Fig. velocity profile with viscosity and friction
လက်တွေ့မှာတော့ viscosity နဲ့ pipe friction ကြောင့် fluid ဟာ pipe diameter တခုလုံးအတွင်း၊ uniform flow rate နဲ့ စီးသွားမှာမဟုတ်ပဲ၊ pipe wall မှာဖြစ်ပေါါတဲ့ flow rate ဟာ၊ အခြားနေရာတွေမှ flow rate ထက် နည်းတာကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. parabolic flow profile
fluid ရဲ့ Reynolds numbers နိမ့်တဲ့အခါ၊ flow ဟာ 'laminar' အနေနဲ့စီးဆင်းပါတယ်။ (2300) နဲ့အောက် Reynolds number ရှိတဲ့ fluids တွေကို၊ 'laminar' flow နဲ့စီးတဲ့ fluids တွေအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ pipe diameter ရဲ့အလယ်မှာ၊ highest fluid velocity နဲ့စီးဆင်းပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် parabolic flow profile အနေနဲ့ စီးဆင်းတယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Fig. turbulent flow profile
velocity ကိုမြှင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ၊ Reynolds number ဟာလည်းမြင့်လာပြီး၊ (2300) ထက်ကျော်လာတဲ့  အခါ၊ pipe အတွင်းမှာ flow turbulent စတင်ဖြစ်ပေါါလာသလို၊ Reynolds number ဟာ (10, 000) ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့၊ completely turbulent အနေနဲ့ စီးဆင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ boiler မှထွက်လာတဲ့ Saturated steam ဟာ၊ super heater ကိုမဖြတ်ခင်၊ moisture လို၊ fluid တွေ ပါဝင်နေတဲ့အတွက်၊ common fluid အနေနဲ့ ယူဆနိုင်ပြီး၊ pipe အတွင်းမှာ၊ 'turbulent flow' အနေနဲ့ စီးဆင်းပါတယ်။
Fig. Reynolds number
Reynolds number (100) မှ (2300) အတွင်းရှိတဲ့ flow region ကို၊ laminar region, (2300) မှ (10, 000) အထိရှိတဲ့၊ region ကို transition region နဲ့ Reynolds number (10, 000) အထက်၊ flow region ကို turbulent region ဆိုပြီးသတ်မှတ်ကြပါတယ်။
saturated steam system မှာ Reynolds number (Re) အနေနဲ့ (10, 000) ထက်နည်းတဲ့အခါ၊ laminar သို့မဟုတ် transitional flow အဖြစ်စီးဆင်းပါတယ်။ laminar flow conditions မှာ pressure drop စတင် ဖြစ်ပေါါပြီး၊ pressure drop ဟာ flow rate နဲ့ directly proportional တိုက်ရိုက်အချိုးကြပါတယ်။ Reynolds number (Re) ဟာ၊ (10, 000) အထက်မှာရှိခဲ့လျှင်၊ turbulent flow အဖြစ်စီးဆင်းပြီး၊ pressure drop ဟာ flow rate ရဲ့ square root တန်ဘိုးနဲ့ directly proportional တိုက်ရိုက်အချိုးကျ ပါတယ်။
Reference : Steam Engineering Tutorials,,http://en.wikipedia.org/
Posted by ကိုထွန်း at 20:20